बेरोजगार टेम्पो चालकले तिर्न सकेनन् घरभाडा, घरबेटीले बोलाए प्रहरी :: Setopati
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, भदौ २२
कमलपोखरी बस्ने ५३ वर्षीय ललितबहादुर सुनुवार विगत १६ वर्षदेखि इमाडोल–रत्नपार्क रूटमा टेम्पो चलाउँछन्।
साहुको टेम्पो चलाएरै कमाएको मासिक २०–२५ हजार रूपैयाँले परिवार पाल्दै आइरहेका थिए। छोरोलाई पनि टेम्पो समितिकै रसिद काट्ने ठाउँमा जागिर लगाइदिएपछि उनको बोझ धेरै घटेको थियो।
'अब न छोराको रोजगारी छ न मेरो। महिनाको १० हजार रूपैयाँ कोठा भाडा तिर्नु त परै जाओस्, ग्यास-चामल किन्ने पैसा समेत छैन,' सुनुवारले भने।
'कमाइ नभएपछि भाडा कसरी तिर्नु? भाडा नतिरेको भन्दै घरबेटीले पुलिस नै बोलाइदिए। बल्लतल्ल ऋण जोहो गरेर २ महिनाको दिएँ। अझै ४ महिनाको तिर्न बाँकी छ,' सुनुवारले भने, 'अब फेरि दुई दिनपछि भाडा माग्न आइपुग्छन्। दिने कुनै बाटो छैन। फेरि पुलिस लिएर आउने हो कि? के गर्ने हो, मैले केही सोच्नै सकेको छैन। अब भगवान भरोसा।'
उनको घरमा एक सिलिन्डर ग्यास र रासनको नाममा १ बोरा चामल मात्रै बाँकी छ।
'समितिले राहत त दिएको थियो तर त्यसले कति दिन धान्छ र! बरू काम गर्न पाए कसैले दिएको राहत चाहिन्थेन,' सुनवार भन्छन्।
उता, बुढानिलकण्ठ बस्ने ३० वर्षीय शिव श्रेष्ठको अवस्था पनि लगभग उस्तै छ।
वैदेशिक रोजगारी सिलसिलामा ३ वर्ष बहराइन र २ वर्ष दुबई बसेपछि नेपालमै केही गर्छु भनेर फर्किएका थिए उनी।
साथीभाइको सल्लाहअनुसार विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा 'हायस' माइक्रोमा लगानी गरे। विगत ५ वर्षदेखि उनले बुढानिलकण्ठ–सुन्धारा (एनएसी) रूटमा गाडी चलाउँदै आएका छन्।
'चैतदेखि कोठा भाडा तिरेको थिइनँ। केही दिनअघि एउटा सहकारीबाट ऋण लिएर जेठसम्मको भाडा तिरेँ। रासन पसलमा राम्रो चिनजान भएकोले ३५–४० हजारको उधारो भइसक्दा पनि माग्नु भएको छैन। उहाँहरूले पनि सधैं उधारो दिन कहाँ सक्नुहुन्छ र,' उनी भन्छन्।
'स्थानीय प्रतिनिधिहरूले यातायात मजदुरलाई संगठनले दिन्छ भनेर मलाई दिनुभएन। यातायात मजदुर संगठनले नदिएको पनि होइन। आधा बोरा चामल, एक किलो नुन, तेल लगायत पाएको थिएँ। खाने मुख चार वटा छ, त्यतिले कसरी पुर्‍याउनु,' श्रेष्ठ भन्छन्।
'सार्वजनिक यातायातमा ७० देखि ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ। हामी सिद्धियौं भने यातायात मजदुर मात्र होइन बैंक पनि डुब्छ। बैंक डुब्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन्छ,' सिटौलाले स्पष्ट पारे।
'लकडाउनको ३ महिनापछि सरकारले काठमाडौं उपत्यका र बाहिर सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गर्‍यो। व्यवसायीहरूले ४ लाखसम्म खर्च गरेर गाडी बनाए। फेरि निषेधाज्ञा सुरू भयो। गाडी पुनः जीर्ण हुन लागिसक्यो,' उनले भने
'मजदुरका लागि यो ६ महिना ६ वर्ष बराबर भएको छ। धेरै जना यो क्षेत्रबाट पलायन भइसके। स्थिति यस्तै रह्यो भने भोलि सामान्य हुँदा पनि यातायात मजदुरलाई खडेरी लाग्छ,' राईले भने, 'अहिले यातायात मजदुरले कोठा भाडा, खाद्यान्न, औषधि लगायत आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न सकेका छैनन्। अझै सोचिएन भने कति जटिल बन्दै जाला।'